एक दिन रिसोर्टमा सांसद लुकाएको खर्च ९० हजार ६१ रुपैयाँ - Kantipath.com
महेश बस्नेतको प्रत्यक्ष सहयोगमा डोलेश्वर रिसोर्टमा पुर्याइएका राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पक्षकाले खाए पिएको खर्च ९० हजार ६१ रुपैयाँ (भ्याटसहित) उठेको छ । मिटिङ हलको ११ हजार,स्याण्डबीच २४ हजार,४४ हजार ७ सयको लञ्चसमेत गरी ७९ हजार ७ सयमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडी सो रिसोर्टले ९० हजार ६१ रुपैयाँ लिएको छ ।
३० जनाको लन्च प्याकेजको प्रति व्यक्तिको रु. १४९० को दरले ४४७००, ३० जनाको हाइ टी, जुस, कफी र कुकीसहित प्रतिव्यक्ति रु. ८०० का दरले २४००० र मिटिङ हलको ११ हजार । छुट छैन, १० प्रतिशत सेवा शुल्क छैन, १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा कुल बिल उठेको रकम रु.९००६१ ।
सत्ता संघर्ष चल्दा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झालगायत डोलेश्वर रिसोर्टमा पुगेका थिए । बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयबाट उनीहरु सिधै डोलेश्वर पुगेका थिए ।
उक्त रिसोर्टमा बस्नेत पनि जसपा नेताहरुको साथमा रहेको तस्बिर सार्वजनिक भइसकेको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधरले डोलेश्वर रिसोर्टमा संसदीय दलको बैठक बसेको दाबी गरेको छ । बिल पनि पार्टीकै नाममा राख्न लगाएको छ । महेश बस्नेतले आफ्नै फेसबुकमा अतिथि देवो भव: को धारणाले सहयोग गरिएको स्वीकार गरिसकेका छन् । रिसोर्टमा एमालेका सांसद महेश बस्नेतनिकटहरुको लगानी रहेको छ । सुर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापा, डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट रहेको वडा नं ८ का अध्यक्ष किरण थापा सक्रिय थिए । थापा उक्त रिसोर्टका लगानीकर्ता पनि रहेको बुझिएको छ ।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। शुक्रबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईपक्षले बैठक बोलाएको हो।
आज १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। बैठकले पार्टीको विधान विपरित जानेहरुको विषयमा निर्णय लिन सक्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा जसपाभित्र दुई धार देखिएको थियो।
उपेन्द्र-बाबुराम पक्षले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिएन भने महन्थपक्षका १५ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। भक्तपुरको एक रिसोर्टमा भएको सांसदको भेलाले महतो नेता चुनिएका हुन्। भेलामा १८ जना सांसद रहेको ठाकुर-महतो पक्षको दाबी छ।
जसपाको कार्यकारिणी समितिमा ५१ जना छन्। ती मध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन्। कार्यकारिणी समितिमा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग बहुमत छ।
Previous Previous post: नेपाल कोरोनाको संकटमा भन्दै न्युजिल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्रीले मागिन सहयोग
Next Next post: कोभिड अस्पताल बनाउन कांग्रेसले दियो भवन
इटहरीमा सेनाको श्रीमती अर्को सँग भेटेपछी….
बझाङमा फेरी एकको हत्या
सावाँकाे भन्दा ब्याजकाे माया
भावी आईजिपीका लागि अहिलेदेखि नै संघर्ष सुरु
सरस्वतीलाई सहयोग गर्न नमोबुद्ध नगरपालिका तत्पर, देश–विदेशबाट सहयोगको प्रस्ताव
श्रीमानको मृत्यु, गर्भवती श्रीमतीसहित ३ छोराछोरीको बिचल्ली…